Mootummaa federaalaaf bajata dabalataa qarshii biliyoonni 14 ragga'e
Finfinnee: Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa bara bajataa 2010f mootummaa federaalaaf bajata dabalataa qarshii biliyoona 14 raggaasise. Manni marichaa bajaticha kan raggaasise walga’iisaa Kibxata darbeetiini.
Bara bajataa 2010f bajata ragga’e qarshii biliyoona dhibba sadiifi biliyoona 20.8 keessaa of eeggannoof kan qabame %2 dandamannaa balaa ummamaaf ooleera.
Bajanni dabalataa kun balaa uumamaafi namtolchee ittisuufi dandamachuu, kaffaltii fandii marmaartuu dargaggootaa hafeef, simannaa yuunvarsiitota haaraa 11 guddisuufi cee’umsa televiizyinii diijiitaalaf oola.
Bajanni ragga’e kun qarshii biliyoona 14n keessaa biliyoonni tokko fandii marmaartuu dargaggootaaf, miiliyoonni 500 simannaa yuunvarsiitota haaraa 11 guddisuuf, biliyoonni 300 televiizyinii diijiitaalaa babal’isuu, bittaa meeshaafi kaffaltii hafeef kan oolu. Qarshiin biliyoonni shan deggarsaafi deebisanii dhaabuu lammiilee balaa tasaafi namtolcheen miidhamaniif, biliyoonni 7.2 galmoota bara bajataa 2010 raawwachiisuuf waajjiraalee hanqinni bajataa mudate faayinaansii gochuuf qabame.
Bajatichis galii taaksiifi kaappitaalarraa argamu qarshii biliyoona 14n akka uwwifamu FBCtu gabaase.
Torban kana/This_Week 12395
Guyyaa mara/All_Days 1821815